FAMPAHALALANA SY SARY KELY MOMBA NY ALIKA KELY POODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary kely momba ny alika kely Poodle Dog
Luca ilay apricot lahy dia miloko Mini Poodle amin'ny 5 taona
Miniature Poodle amin'ny fiteny hafa
Frantsay: Carniche Moyen
Italiana: Miniature Poodle
Rehefa nokolokoloina mba hampiseho ny fenitry ny alika ny vatan'i Miniature Poodle dia natao hanomezana endrika toradroa. Mitovy halava ny halavany sy ny hahavony amin'ny malazo. Ny karan-doha dia boribory somary somary misy fijanonana voafaritra ihany. Manana vavony lava sy mahitsy izy io. Ny maso maizina sy miendrika boribory boribory somary mifanalavitra ary mainty na volontany. Ny sofina mihantona akaikin'ny loha ary lava sy fisaka. Samy mitovy ny haben'ny alika na ny tongotra eo anoloana na any aoriana. Haavo ny topline. Apetraka ny rambony ary avo dia avo. Indraindray dia miantsona amin'ny antsasaky ny halavany na latsaka izy mba hahatonga ny alika ho mandanjalanja kokoa. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny dock amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana. Dewclaws azo esorina. Ny tongotra miendrika oval dia somary kely ary arifitra ny rantsan-tongotra. Ny palitao dia olioly na kofehy. Izy io dia miaraka amin'ny loko matevina rehetra, ao anatin'izany ny mainty, manga, volafotsy, volondavenona, crème, apricot, mena, fotsy, volontany na cafe au lait. Na dia tsy manao ny fenitra fampisehoana an-tsoratra aza ny mpamboly sasany dia miompy Poodles miloko parti. Jereo ny fikolokoloana ireo karazana rakitsary Poodle.
Ny Miniature Poodle dia alika namana manan-tsaina sy falifaly. Afaka ampiofanina amin'ny ambaratonga avo izy ary tena vonona sy faly mampifaly ny mpitantana azy. Mampihomehy sy marani-tsaina, izy io dia matetika ampiasaina ho toy ny alika sirkus. Arakaraka ny mahahendry ny alika no vao mainka ilana azy ny sainy. Ity karazana ity dia tsy afaka mipetraka any ivelany ao anaty trano kennel. Mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana izany. Mety ho avo lenta raha tsy omena ny karazany sy ny habetsaky ny fanatanjahan-tena . Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , izay itarika ny alika hino fa alpha amin'ny olombelona izy io. Mety hiteraka ny alika io mora tohina sy mitebiteby , ary tsy dia atokisana loatra amin'ny ankizy sy ny olon-tsy fantatra, miaraka amin'ny olana maro hafa momba ny fitondran-tena. hifanerasera tsara ny alikanao. Watchdog tena tsara io noho ny habeny, mahalana vao lasa masiaka. Ny alika dia mety manomboka mivonkina be nefa tsy mety serasera olombelona amin'ny canine , fitsipika arahana ary ferana ny zavatra avelany hatao. Ny Poodles dia sariaka amin'ny alika hafa ary biby fiompy tsy kaninina . Alao antoka fa mafy orina ity alika ity ianao mpitarika fonosana hialana amin'izay tsy ilaina olan'ny fitondran-tena .
Hahavony: 11 - 15 santimetatra (28 - 38 cm)
Lanja: 15 - 17 pounds (7 - 8 kg)
Ny haben'ny karazam-boankazo Poodle eken'ny AKC dia voafaritra amin'ny haavony fa tsy amin'ny lanjany. Ny Miniature Poodle dia tsy maintsy mihoatra ny 10 santimetatra sy 15 santimetatra na latsaka amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka. Izay Poodle izay mihoatra ny 15 santimetatra na latsaky ny 10 santimetatra amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka dia tsy afaka mifaninana amin'ny peratra fampisehoana AKC ho Miniature Poodle.
Mora katarakta, atrophy retina miandalana (PRA) izay mety hiteraka fahajambana, IMHA (Immune Mediated Hemolytic Anemia), aretim-po, diabeta, epilepsy, maso mikoriana, aretin-tsofina ary aretin-koditra amin'ny hoditra. Brown Poodles dia mazàna lasa fotsy volondavenona.
Ny Miniature Poodle dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Milamina ao an-trano izy io raha toa ka manana fanatanjahan-tena ampy. Hahomby izany raha tsy misy tokontany.
Miniature Poodles mila a mandeha isan'andro . Raha eny am-pandehanana dia alao antoka fa ny alika dia miakatra eo anilany na ao aoriany ilay mitazona ny firaka, tsy eo alohany mihitsy, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho ny olombelona. Toy ny karazana rehetra, ny lalao dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda. Ankafizin'izy ireo ny fotoana filalaovana rano sy fitiavana. Izy ireo dia karazany iray be dia be miaraka am-piandohana fihazana sy famerenana, na dia miavaka amin'ny hetsika fampisehoana atolotra azy ireo aza ianao, anisan'izany ny fahaizanao, fankatoavana, fihetsiketsehana ary fampisehoana fampifanarahana, ary matetika ny iray dia handao peratra iray ary handeha mivantana amin'ny iray hafa hifaninana. Satria tia rano izy ireo dia alika mitsorika dock be ary tia manangona rano.
Alika kely mpanao ady totohondry 5 herinandro
Ilaina ny fikolokoloana be raha toa ka aseho ilay alika. Ny paoma dia tsy maintsy soloana matetika ary hokapaina isaky ny enina ka hatramin'ny valo herinandro. Diovina ary zahao matetika ny sofina raha misy savoka na kongona na aretina ary esory ny volo maniry ao anaty lakandranon-tsofina. Mila mizana mizana matetika ny nify. Satria tsy raraka ny palitao dia tokony hokopahina. Misy karazany maro ny clip Poodle. Ny mahazatra indrindra ho an'ny tompona biby dia ny clip fikarakarana mora antsoina hoe 'pet clip,' 'puppy clip' na 'clip clip', izay tapaka fohy ny palitao manerana ny vatana. Ny sarimihetsika malaza dia ny lasely anglisy ary ny clip Continental izay aharatra ny antsasaky ny vatana, tavela manodidina ny kitrokely ny bracelet, ary tavela eo amin'ny rambony sy ny valahany ny pom-poms. Ny fenitra AKC dia mamela alika latsaky ny herintaona haseho amin'ny saribakoly alika fampisehoana izay manana fepetra manokana toy ny pom-pom amin'ny faran'ny rambony. Ny fomba fanaovana clip hafa dia ny clip kontinanta nohavaozina, clip an-tanàna sy ambanivohitra, clip kennel na utility, clip fahavaratra, ary clip Miami of bikini. Poodles nandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ny marary allergy .
Ny Poodle dia fantatra manerana an'i Eropa Andrefana nandritra ny 400 taona farafahakeliny ary naseho tamin'ny sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-15 sy ireo sary nalaina tamin'ny taonjato voalohany. Mampiady hevitra ny lohahevitra momba ny toerana namelarana ny alika tamin'ny fomba ofisialy ary tsy misy olona tena mahalala ny fiaviany marina. Frantsa dia nitaky ny niaviany, saingy ny AKC dia manome ny voninahitra an'i Alemana, izay nilazan'izy ireo fa alika mpamaky rano. Ny fanambarana hafa dia i Danemark, na Piedmont taloha. Ny azo antoka dia taranaky ny ankehitriny ny alika lany tamingana Alika amin'ny rano frantsay, ny barety ary mety ny Hound Water Hungarian. Ny anarana 'Poodle' dia azo inoana fa avy amin'ny teny alemaina 'Pudel,' izay midika hoe 'izay milalao anaty rano.' Ny 'Poodle clip' dia noforonin'ireo mpihaza mba hanampiana ny alika milomano tsara kokoa. Namela rivotra amin'ny vitrana izy ireo mba hiarovana azy ireo amin'ny bararata mangatsiaka sy maranitra. Ireo mpihaza any Alemana sy Frantsa dia nampiasa ny Poodle ho toy ny gundog ary ho toy ny vorona riandrano ary hamofona truffles mihohoka ambanin'ny tany anaty ala. Nanomboka nampiasa ny karazany ny Frantsay ho mpanao dihy noho ny fahakingan'ilay alika sy ny fahaizany mampianatra. Nanjary nalaza be tany Frantsa io karazana io, izay nanjary anarana mahazatra 'French Poodle', fa ny frantsay kosa niantso ny anarana hoe 'Caniche', izay midika hoe 'alika gana. ” ny Kilalao SY Poodle kely ny karazany dia nalaina avy tamin'ny alika lehibe kokoa, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Poodles mahazatra . Tamin'ny taonjato faha-18, Poodles kely kokoa dia nanjary ankafizin'ny olona mpanjaka. Ny habe ofisialy telo dia ny Toy, Miniature ary Standard Poodle. Heverina ho iray karazana izy ireo ary tsaraina amin'ny fenitra an-tsoratra ihany fa amin'ny habe hafa takiana. Ny mpiompy koa dia miteraka habe eo anelanelan'ny antsoina hoe a Klein Poodle (Medium Poodle) ary kely kokoa Teacup Poodle . Ny sasany amin'ireo talentan'i Poodle dia misy: retrie, mailaka, mpiambina, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
PCC = Poodle Club any Canada
Leia the Miniature Poodle amin'ny 2 taona— 'Leia dia mamy, mankatò ary sariaka be. Mety ho alika raisinao izy fitsangatsanganana lava na ovy feno fandriana. Izy mamaky mora ny fihetseham-poko ary mahalala milamina rehefa tiako izy. Tiany ny miaraka amin'ny olona, ​​saingy tsy dia mifampiresaka izy. Saika ny zavatra rehetra ataony amintsika, raha mbola misy zavatra ataony amin'ny fianakaviako sy izy dia io no zavatra tiany indrindra. Mijery an'i Cesar Millan aho, ary miombon-kevitra amin'ny filozofiany be dia be aho ary mampihatra izany amin'ny alika, ary azoko antoka fa nanampy azy hamolavola azy ho mpiara-dia amin'ny kanelina mahatalanjona ankehitriny izy io. Na dia tsy maintsy marihiko aza fa tsy nanana olana ara-pitondrantena firy izy tamin'ny voalohany, toa azy milamina sy manaiky ho azy ny voajanahary , ka tsy voatery nanao be loatra aho. Fa tena nanampy tamin'ny fametrahana ny toerako izany mpitarika fonosana eo imasony. '
Leia the Miniature Poodle amin'ny 2 taona
Teddy ilay apricot lahy dia miloko Miniature Poodle amin'ny faha-7 taonany
Sammy the Miniature Poodle amin'ny faha-11 taonany
Murphy the Miniature Poodle amin'ny 1 taona
Ethan ilay Mini Poodle
Toro-hevitra fohy fohy alemana 6 volana
'Ity ny alikako Rudy. Tena marani-tsaina izy. Rehefa milalao izy dia mihazakazaka ao aorianao sy izy mikiakiaka mandra-pijanonao mba hahafahany manatrika anao . Mihazakazaka eo am-baravarana koa izy ary mamely ny fiarovany mikiakiaka, mibontsina ary mitomany rehefa manontany azy ianao raha te handeha na veloma ao anaty fiara. Fantany koa ny tetika maro - afaka mipetraka izy, mangataka (mipetraka ary toy ny alika prairie), mihodina, miteny, mandry, mihorona, mijoro amin'ny tongony 2, mandihy ary mahazo baiko. Ny zavatra mahatsikaiky iray hafa ataony dia ny mihodina sy mikosoka amin'ny zavatra rehetra ary lasa adala isaky ny mamafy menaka manitra aho. Miketrika be koa izy (izay asehony 'miresaka' isaky ny mikasika ny valahany ianao) . Somary eo amin'ny lafiny kely kokoa izy ho an'ny Miniature, 10 pounds sy 12 santimetatra ny halavany. Izy dia loko mena mainty toy izany koa. Mijanona foana ny olon-drehetra ary manontany hoe inona ny karazany ary raha tsy fahita firy ny mena. Izy no alika tonga lafatra. '
Rudy the Miniature Poodle amin'ny 1 taona
Afaka. Ch. Rosebell's Exceptionn (anaram-bosotra: Nick), sary natolotr'i Rosebell Kennels
bichon frize mpanjaka Charles spaniel afangaro
Voanjo ilay alika kely Poodle Mini amin'ny 9 herinandro
Voanjo ilay alika kely Poodle Mini tamin'ny volana 3 taorian'ny volony voalohany nilalao ny kilalao bitro novonoiny
Charlie a phantom Mini Poodle toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro matory amin'ny tany
Hijery ohatra misimisy momba ny Miniature Poodle
Sary kely Poodle kely 1
Sary kely Poodle kely 2
manao ahoana ny endrik'ilay pointer fohy jerman
anglisy bulldog frantsay bulldog mix
alika miharo heeler corgi manga
tri color amerikana staffordshire terrier